PVC Camera Gabion enemingxuma - China Hebei Samsung Metal wocingo
PVC Camera Gabion enemingxuma
Eziphathekayo PVC camera gabion PVC neegabions wawutyabeka, kukho uhlobo wire ibhokisi olunemingxuma, zenziwe esindayo ezinamacala wire kwesefu olukiweyo ngocingo yesinyithi. PVC neegabions camera netoti wangaphandle ukusuka 3.0mm ukuya 4.5mm, kwaye sangqa wire ungqameko okanye ucingo edge yenye ucingo gauge liyajiya kwicingo enemingxuma eqhelekileyo. PVC neegabions camera zenziwe lweplastiki camera steel wire kwalenza: kwizinga eliphezulu wire onekhaboni ephantsi intsimbi, siya tiyisisaka PVC ukhuselo layer phezu kwamanzi steel wire kwalenza, uze ngokufutha ...
Min.Order Ubungakanani: 10 Beka / Imisa
Supply Amandla: 500 Beka / Imisela Usuku nganye
Eziphathekayo PVC camera gabion
PVC neegabions wawutyabeka , kukho uhlobo wire ibhokisi olunemingxuma, zenziwe esindayo ezinamacala wire kwesefu olukiweyo ngocingo yesinyithi. PVC neegabions camera netoti wangaphandle ukusuka 3.0mm ukuya 4.5mm, kwaye sangqa wire ungqameko okanye ucingo edge yenye ucingo gauge liyajiya kwicingo enemingxuma eqhelekileyo.
PVC neegabions wawutyabeka zenziwe lweplastiki camera steel wire kwalenza: kwizinga eliphezulu wire onekhaboni ephantsi intsimbi, siya tiyisisaka PVC ukhuselo layer phezu kwamanzi steel wire kwalenza, uze waluka ibe kwesefu wire ezinamacala kuquka zonke iinkcukacha. Le PVC ukhuseleko maleko unako ukuqinisa ukhuseleko ngokuchasene bume eliphezulu ungcoliseko. Okwa ti ungakhetha imibala eyahlukileyo ukuze utshatise kunye bume engqongileyo.
Le iinkcukacha eqhelekileyo gabion PVC camera
Ngokuqhelekileyo lo ubukhulu ivela 2.5mm ukuya 3.4mm
Ezinye iinkcukacha ezivela agents nazo ziyafumaneka.
Ukusetyenziswa PVC camera neegabions
neegabions asetyenziswa kwiimeko ezininzi kuquka nokuzinziswa emhlabeni intshukumo kunye nokhukhuliseko, ulawulo umlambo, amadama, ichibi uphuculo, imbonakalo kunye neendonga ezigcinwayo, njl
Iimpawu kunye ezilungileyo PVC neegabions camera
PVC neegabions wawutyabeka Bangaphatha misinga enamandla kwaye extruding force kwaye ugcine nemilo yayo. Neegabions zilula ngokwaneleyo ukuba ukufaka ukuba akukho amava kuyimfuneko ukufumana nemiphumo emihle. PVC camera ngaphandle steel wire kwalenza, PVC wawutyabeka gaions ingcono kwi umhlwa resistence, antioxidation, uqinile, ngexesha elifanayo PVC camera gabion intle ngaphezu non-PVC camera. Sinako ukutshatisa kunye bume engqongileyo kunye nokwenza abantu bekhululekile ngakumbi.
Previous: Kwalenza Gabion nylon
Okulandelayo: U Uhlobo Wire
Isefu welding Gabion enemingxuma
Kwalenza Gabion nylon